I-China Eyenziwe Ngezifiso I-GCK(L) Ikhabethe Lamandla Kagesi Aphansi Ifektri Yokushintsha I-Price-shengte abakhiqizi nabaphakeli |Shengte
I-GCK(L) Eyenziwe ngokwezifiso Ikhabethe Lamandla Kagesi Aphansi I-switchgear Factory Price-shengte
I-GCK (L) i-low-voltage switchgear yokukhipha amandla yakhiwe ikhabethe lesikhungo sokusabalalisa amandla (PC) kanye nesikhungo sokulawula izimoto (MCC).
Ilungele abasebenzisi bamandla njengezitshalo zamandla, iziteshi ezingaphansi, amabhizinisi ezimboni kanye nezimayini njenge-AC 50Hz, i-voltage ephezulu yokusebenza ukuya ku-660V, ukusebenza okuphezulu kwamanje kuya kuhlelo lokusabalalisa lwe-3150A, njengokusatshalaliswa kwamandla, ukulawulwa kwezimoto kanye nokuguqulwa kwamandla kwemishini yokusabalalisa izibani.Ukusabalalisa nokulawula.
Uhlaka lwekhabhinethi lushiselwe ngensimbi emise okukhethekile enamandla amahle nokuqina.
I-rack kanye nezimbobo zokufaka izingxenye zenziwa ngokuya nge-20mm modulus.
Izingxenye zesakhiwo zangaphakathi zenziwe ngothayela, futhi izingxenye zangaphandle (ama-racks nezingidi zezicabha) zenziwe nge-phosphated futhi zifuthwe nge-electrostatic epoxy powder.
Isakhiwo sekhabhinethi ye-PC feeder sifana nekhabhinethi yokuphakelayo.Lapho i-feeder yamanje ingu-630 A ~ 2000A, ikhabethe ngalinye lingahlonyiswa ngezihibe ezimbili futhi lifakwe phezulu naphansi.
Ekhabetheni lesikhungo samandla (i-PC), ingxenye engaphezulu iyindawo yebhasi evundlile, futhi ingxenye engezansi yigumbi le-circuit breaker.I-circuit breaker ingahlonyiswa ngochungechunge lukazwelonke lwe-ME, uchungechunge lwe-CW1 nokunye.Ingase futhi ifakwe zonke izinhlobo zama-circuit breaker akhiqizwa phesheya, njengalawo akhiqizwa yi-ABB Company, ngokochungechunge lwamakhasimende'needs.E, ama-circuit breaker akhiqizwe ngu-Schneider, kanye nama-circuit breaker ahlakaniphile.
Uhlelo lwebhasi: Ibhasi lomzimba wekhabhinethi lamukela uhlelo lwezigaba ezintathu lwezintambo ezinhlanu, ibhasi elilodwa uma lilinganiswe okwamanje lebhasi elivundlile lingu-1250 A noma ngaphansi, ibhasi eliphindwe kabili lapho ibhasi lamanzi elilinganiselwe lingaphezu kuka-1250 A, ibhasi elivundlile phakathi kwekhabhinethi nekhabhinethi. lakhiwe ngamabhulokhi axhumayo, ibhasi eliqondile livalwa ngepuleti elinothayela kanye nepuleti le-plexiglass elikhanyayo, futhi i-baffle yangaphakathi isetshenziselwa ukukhawulela ukusabalalisa kwe-arc.Ibhasi elingathathi hlangothi libekwe phambi kwekhabhinethi phezulu, futhi ibhasi elivikelayo (PE) libekwe phansi kwekhabhinethi, elixhunywe nebhodi lokuhlukanisa kanye nomnyango womzimba wekhabhinethi, ngaleyo ndlela iqinisekise ukuqhubeka kwesisekelo.
Ikhabhinethi kanye nekhabethe lekhabethe lezinhlelo ezimisiwe ezifana nesinxephezelo se-capacitance kanye ne-metering inomumo wokubukeka ofanayo kanye nendawo yebhasi evundlile, ngaleyo ndlela iqinisekise ukuthi ikhabethe lekhabethe kanye nekhabhinethi engashintshi kungasetshenziswa ngokuhambisana.
Kunamafasitela okungenisa umoya emvelo ngaphansi nangaphezulu kwekhabhinethi yokushintsha ngaphandle kokunciphisa izinga lokuvikela legobolondo.
Izinga lokuvikela legobolondo lekhabhinethi yi-IP4.
Isilinganiso sokusebenza (Hz) 50
I-voltage yokusebenza elinganiselwe (V) 380
I-voltage yokufaka elinganiselwe (V) 660
Isilinganiso esiphezulu sokusebenza samanje (A) Ibha yebhasi evundlile 630-4000
Ibha yebhasi eqondile 1600
Isilinganiso esiphezulu sokumelana nokumelana namanje Ibha yebhasi evundlile 80kA (Inani elisebenzayo)/1 isekhondi
Ibha yebhasi eqondile 50kA (Inani elisebenzayo)/1 isekhondi
Isilinganiso esiphakeme kakhulu sokumelana nokumelana namanje Ibha yebhasi evundlile 170kA
Ibha yebhasi eqondile 110kA
I-plug-in ye-Main Circuit (A) 200/400/630
I-Axiliary Circuit Connector (A) 10
Imvamisa Yamandla Iminithi elingu-1 (A) 2500
Umthamo omkhulu wemoto yokulawula (kW) 155
Izinga lokuvikela IP30~IP40
Imodi yokusebenza Indawo, ukude, okuzenzakalelayo
Okwedlule: I-Wholesale Price ye-HXGN-12 AC High Voltage Switchgear Insimbi Elungisiwe Yensimbi Evaliwe I-Loop Switchgear-shengte
Olandelayo: Intengo Yefekthri I-GGD AC Ikhabhinethi Yokusabalalisa Amandla Kagesi Aphansi Umhlinzeki-shengte
Intengo Yesitolo Esejwayelekile ye-HXGN-12 AC High Voltage Swi...
Ikhwalithi ephezulu XGN15-12 Uhlobo Lwebhokisi Olugxilile lwe-AC Metal Cl...
I-KYN28A-12 I-Indoor Metal Armored Pull-out engcono kakhulu...
Intengo Yefekthri GGD AC Ukusabalalisa Amandla Kagesi Aphansi C...
Intengo Yefekthri Ephansi Yokusabalalisa Ikhebula Lamandla Kagesi Bo...
Intengo Engcono Kakhulu I-Voltage Switchgear Ephansi GCS I-Volta Ephansi...